Zvinodiwa nenyika izvozvi: Shanghai Cooperation Organisation Tourism Board
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » Zvinodiwa nenyika izvozvi: Shanghai Cooperation Organisation Tourism Board
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • China Kuputsa Nhau • Kazakhstan Breaking News • Kyrgyzstan Breaking Nhau • nhau • Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Pakistan Breaking News • Russia Kuputsa Nhau • Tajikistan Kupwanya Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Uzbekistan Kupwanya Nhau
rakanyorwa Agha Iqrar
Mutungamiriri we Pakisitani Imran Khan apo aitaura kumusangano weShanghai Cooperation Organisation (SCO) muBishkek akataura nezvekudikanwa kwehurongwa hwekubatana mukuvandudza kushanya kwenyika dziri nhengo dzeSCO, se DND nhau agency yakashuma. Chiratidzo chake chinotsigira chishuwo chakamirirwa kwenguva refu chevashandi vezvekushanya kuCentral Asia pamwe neUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO). Kuumbwa kweSCO Tourism Board kunogona kuva nhanho yekutanga yekuzadzisa zvinangwa zveindasitiri yekushanya yakabatana
SCO isangano rezvematongerwo enyika rinoumbwa neChina, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, neUzbekistan uye wad yakavambwa muShanghai mu2001. Pakutanga yakaumbwa senzvimbo yekuvaka kuvimba yekudzikisira miganhu muhondo, zvinangwa zvesangano nehurongwa kubva ipapo zvakawedzera kusvika kwakawedzera kubatana kwemauto neanopokana nehugandanga uye kugovana njere. SCO yakawedzerawo tarisiro yayo kumatangiriro ehupfumi hwedunhu senge ichangobva kuziviswa kusangana kweChina-inotungamirwa Silk Road Economic Belt uye neRussia inotungamirwa neEurasian Economic Union.
Pakistan neIndia mhandu mbiri mukati memamato eSCO, nekudaro, kufunga zano rekubatana revisa pakati pevakwikwidzi vechinyakare ingori zviroto asi zvinogona kufungidzirwa nekuumbwa kweSCOTB (SCO Tourism Board) iyo inogona kupa mukana nyika dzese kuona mabhenefiti erunyararo kuburikidza nekushanya
Kusiya Pakistan neIndia parutivi, dzimwe nyika dzeSCO dzinogona kuenda kumberi nehurongwa hwekubatanidza kusimudzira kushanya munzvimbo dziri nhengo dzeSCO, uye pane mukana wekuti Pakistan neIndia mune ramangwana vanzwisise zvakanakira chirongwa chakabatana chekushanya.
Zvinotendwa kuti padanho rekutanga, Central Asia Republics, avo vari nhengo dzeSCO (Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan) pamwe neRussia neChina vanogona kufambira mberi pasi pechiratidzo cheMutungamiriri wePakistan Imran Khan yemubatanidzwa wekushanya zano.
Central Asia nyika ndeimwe yenzvimbo dzakanakisa dzekushanya kwenyika, uye vakatamba mushe munzvimbo yekushanya mukati memakumi maviri emakore apfuura mushure mekuwana kuzvitonga kubva kune yaimbova Soviet Russia.
Nyika idzi dzine zvese zvekupa zvinosanganisira ecotourism, runako rwepanyama, vanogamuchira uye vane hushamwari vanhu, uye akanaka masevhisi uye zvigadzirwa. Mhinganidzo yekuenderera mberi kwekushanya kwekushanya munzvimbo ino kusavapo kwekudyidzana kwakasimba pakati pevakuru vevashanyi venyika idzi dzese nehutongi hwevisa.
Vashanyi vepasi rese vanosangana nematambudziko akakura kana vachida kuyambuka muganho kubva kune imwe Central Asia Republic kuenda kune imwe nyika yepakati peAsia (semuenzaniso kubva kuTajikistan kuenda kuUzbekistan kana Kyrgyzstan). kushanya uye kuwedzera mari yayo yekushanya. Izvi zvinogoneka kana paine kubatana kwakasimba pakati pemasangano evashanyi enyika dzese idzi. Iko kune kudikanwa kweJoint Tourism Strategic, iyo yakaratidzirwa neMutungamiriri wePakistan Imran Khan, uye ipapo SCO inogona kufambira mberi yakananga kune SCO Tourism Board inoumbwa nevakuru vezvekushanya venyika dzese dzeSATO. Bhodhi rakadai rinozoita basa rakanaka kune hukama hwoushamwari hwenyika idzi dzese mune ramangwana.
Tourism ndechimwe chezvishandiso zvinobudirira zvikuru zvemari yekuwana nekumisikidza runyararo runogona kuwanikwa. Tourism haifanire kutarisirwa kwete chete mupi wemari asi kuwirirana uye runyararo jenareta.
Dambudziko remusika wekushanya weSouth Asia ndewehukama husina kunaka neIndo-Pakistan uye zvinokosheswa nehurumende zvinopesana nezvinodiwa neindasitiri yekushanya.
MuSouth Asia, hurumende dzePakistan, India, Sri Lanka, Nepal, neAfghanistan vane mhirizhonga dzakasiyana dzezvematongerwo enyika nevezvematongerwo enyika, uye ichi ndicho chikonzero chinotungamira chekuti South Asia Association for Regional Cooperation (SAARC) yakundikana kutanga kudyidzana uye yakasimba network mumunda wezvekushanya, nekuti SAARC haina kumisikidza chero bhodhi rekushanya kuti igadzirise nyaya iyi.
Chirongwa cheUNWTO Silk Road Chirongwa chinogona kuzadzikiswa chete kana nhengo dzenyika dze SCO padanho rehurumende, pamwe nevevasiri vehurumende nevateereri, vabatana maoko kuchinangwa chakafanana chekusimudzira nzvimbo yekushanya mudunhu iri.